ဘာစီလိုနာ ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့် ပွဲမှာ ဖီရန်ဗားရိုစ့် အသင်း ကို ၅ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရပြီး အဖွင့် လှခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲမှာ အသင်း ခေါင်းဆောင် မက်ဆီ ဂိုးသွင်း နိုင်ခဲ့ပြီး ရိုင်ယန်ဂစ် ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ ရာသီ ဆက် တိုက် ဂိုးသွင်း နိုင်တဲ့ မှတ်တမ်း ကို လိုက်မီ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာကာ လူငယ်လေး အန်ဆု ဖာတီ ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်း တစ်လျောက် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်ခင် မှာ ၂ ဂိုး သွင်းနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး လူငယ်လေး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ လူငယ်လေး ဆာဂျီယို ဒက်စ် ဟာလည်း အသင်း ရဲ့ ပထမဆုံးသော ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲဝင် အမေရိကန်သား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာကာ နောက်ခံလူ ပီကေး ကတော့ အနီကတ် နဲ့ အထုတ် ခံ ခဲ့ရပြီး ယူဗင်တပ် နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော် ခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ အဆိုပါ ပွဲ အပြီးမှာ ဂိုးသမား တာစတီဂျန် ၊ နောက်ခံလူ လန်းလတ် ၊ ပီကေး နဲ့ ဖရန်ကီ ဒီယွန် တို့ ကို စာချုပ်သစ်တွေ ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ပီကေး ဟာ ၂၀၂၄ ၊ တာစတီဂျန် က ၂၀၂၅ နဲ့ လန်းလတ် နဲ့ ဒီယွန် တို့ ကတော့ ၂၀၂၆ အထိ အသီးသီး စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရိန်းဂျားစ် အသင်း ကို ကိုင်တွယ် နေတဲ့ လီဗာပူး အသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း စတီဗင် ဂျရတ် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Angle Revive သောက်ရေသန့် လုပ်ငန်း ဟာ အကြပ် အတည်း တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပြီး ပေါင် ၁ သန်း ခန့် အကြွေး တင်နေ တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ဝင်ရောက် ကစား မယ့် ကစား သမား ၂၅ ဦး ရဲ့ အမည်တွေ ကို ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ရာမှာ ဂိုးသမား ရိုမဲရိုး နဲ့ နောက်ခံလူ ဖီးလ်ဂျုံးစ် တို့ ပါဝင် မလာ ခဲ့ကြဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ကတော့ သူတို့ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် လူစာရင်း ကို ထုတ်ပြန် ရာမှာ အနားယူ သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားကြီး ပီတာဆက်ချ် ရဲ့ အမည် ကို ကစား သမား အဖြစ် ပြန်လည် ထည့်သွင်း သွားခဲ့ပါတယ် ။ ပီတာဆက်ချ် ဟာ အသင်းဟောင်း ချဲလ်ဆီး အတွက် ကာလတို စာချုပ် နဲ့ ကစားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာလို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
UEFA ဟာ လာမယ့် ၂၀၂၄ – ၂၅ ဘောလုံး ရာသီ က စပြီး ချန်ပီယံ လိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကို ၃၂ သင်း ကနေ ၃၆ သင်း အထိ အသင်း အရေ အတွက် တိုးမြှင့်ပြီး ကျင်းပ သွားဖို့ စိတ်ကူး နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဂနာဘရီ မှာ ကိုဗစ် ပိုး တွေ့ရှိ ခဲ့တာ ကြောင့် နေအိမ် မှာ ကွာရင်တိုင်း ဝင်နေရပြီ ဖြစ်ကာ အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော် ခဲ့ရပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ အဲရစ် ဘိုင်လီ ဟာ ကြွက်သား ဒဏ်ရာ ကြောင့် ၃ ပတ်ခန့် အနားယူ ရလိမ့်မယ် လို့လည်း နည်းပြ ဆိုးရှား က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကလပ် အေဇက် အယ်ခမာ အသင်း ရဲ့ ကစား သမား ၁၃ ဦး ဟာ ကိုဗစ် ပိုးတွေ့ ရှိ ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဟာ ကြာသပတေးနေ့ မှာ ကစားမယ့် နာပိုလီ နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ကို တော့ ဖျက်သိမ်းခွင့် မပြုခဲ့ ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် ဟာ ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ကို ဇန်နဝါရီ မှာ ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပြီး PSG အသင်း ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားတယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဥက္ကဌ ဘာတိုမြူ ကတော့ မိသားစု ဝင် အတွင်း မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိမှု ဖြစ်ခဲ့တာ ကြောင့် ဆေးစစ်မှု ခံယူ ခဲ့ရပြီး ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ကို လာရောက် အားမပေး နိုင်ခဲ့ ဘူးလို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။